csr 1687, Munyori paKarman® Mawiricheya
Maitiro Ekufambisa eWheelchair yeMagetsi
Posted on February 8, 2019 November 20, 2020 by csr 1687
Kune nzira shomanana dzekutakura cheya chewiricheya cheya. Kufamba Kwemota Nzira yekutanga ndeye kushandisa kukwirisa mota. Mota zhinji dzinogona kugadzirisa chinosimudza chinogona kushandiswa kusimudza nyore wiricheya yemagetsi mumotokari uye kuidzikisa. Nesarudzo iyi, mumwe anofanirwa kugara achifunga […]
Posted in Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau	| Tagged wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu	Leave mhinduro
Tranzit Go Inopetwa Simba Simba Wiricheya
Kana zvasvika kune mawiricheya emagetsi, imwe yenyaya hombe kukura kwechigaro uye huremu zvichiita kuti zvinetse kufamba. Karman Healthcare yawana mhinduro neTranzit Go Inopetwa Simba Wiricheya. Iyi dhizainzi dhizaini inotora kubva pamakore makumi maviri nemashanu ekugadzira zvigadzirwa uye inoramba yakafanana neKarman Healthcare yemhando yepamusoro inobatwa […]
Posted on February 1, 2019 November 20, 2020 by csr 1687
Gore rino Karman Healthcare iri kupemberera makore ayo makumi maviri nemashanu! Ngatitorei nekukurumidza tarisa izvo zvakaitwa nekambani iyi: Kutanga kusimbiswa mu25, Karman Healthcare chikamu cheindasitiri yekufambisa ine anopfuura mazana maviri emhando dzakasiyana dzemawiricheya. Ivo ndivo nyika inotungamira inogadzira muwiricheya hutsva. Karman anopa mutsara uzere we […]
Ndiani Akabatsira Kuvandudza Wiricheya?
Posted on January 30, 2019 November 20, 2020 by csr 1687
Pakave nevanhu vazhinji vakabatsira kugadzira wiricheya zvazviri nhasi. Munhoroondo yese, chinangwa chemawiricheya zvachinja zvishoma kugadzirisa zvido zvevanhu. Wiricheya yekutanga yakanyorwa yakavezwa pane dombo rekare reChinese asi isina chokwadi nezvemugadziri. Nekudaro, yekutanga wheelchair yakazvipira inozivikanwa se […]
Posted in Mawiricheya asingaremi, Retail, Time Machine, hwiricheya, Wiricheya Nhau	| Tagged wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu	Leave mhinduro
Wese munhu anowana nguva yakaoma pane imwe nguva muhupenyu hwake. Vamwe vanogona kudzidza kubata nemamiriro ezvinhu akadaro vamwe vasingaite nekuda kwekushayikwa kweruzivo. Kune nzira dzakawanda dzinogona kubatsira chero munhu kukunda izvi zvakashata zviitiko. Shanduko dzakakura dzinogona kutora nguva yakareba kuti vamwe vabate nadzo, uye vamwe vangangokwanisa […]
Maitiro Ako Nyaya dzeWiricheya Yakave Yakagadziriswa neTekinoroji
Posted on January 25, 2019 November 20, 2020 by csr 1687
Wanga uchiziva here nezvevanhu vane mamirioni 11.6 muUS vane mhando dzakasiyana dzekuremara uye vanoshandisa akasiyana mafambiro ekushandisa? Munguva ino yehunyanzvi, nyaya zhinji dzewiricheya dzakaunzwa kurerukirwa. Hazvingave zvisina kunaka kutaura kuti vanhu vakaremara, avo vanovimba zvachose newiricheya, vanogona kunzwa kusurukirwa uye kusurukirwa. Tekinoroji […]
Zvinotora nguva yakareba sei kuti ushandise wiricheya zvinoenderana nerudzi rwewiricheya yaurikushandisa uye kuti chiitiko chako chemberi nemawiricheya chingave chii. Iwe unogona kunge wakasarudza wiricheya yakakosha kana wiricheya yemagetsi. Asi, uri wekutanga-nguva wiricheya mushandisi, unogona kuzviwana zvakaoma kune vaviri […]
Posted on January 21, 2019 November 20, 2020 by csr 1687
Kuva muwiricheya kunogona kuita sekunetsa pakutanga, asi nekufamba kwenguva unozotanga kujairirana neaya mararamire matsva. Tatsvaga mamwe emawiricheya akanakisa ekufamba, kubika, uye zvimwe zviitiko zvezuva nezuva. Kufamba: Ita shuwa kuti une muridzi wechifoni, cheya cheya inobatana nechigaro chedu […]
VANHU VANHU VANHU VANHU VANYANZVI VANOSHANDISA MAWURE
Posted on January 18, 2019 November 20, 2020 by csr 1687
Kune vanhu vazhinji vane mukurumbira vakashandisa mawiricheya. Ivo mumwe nemumwe akasiya chakasimba chakadzika muminda yavo zvisinei nekuremara kwavo. Heano vanhu vashanu vane mukurumbira vaishandisa mawiricheya. Stephen Hawking Uyu ane mukurumbira Fizikisi aive nemhedzisiro yakakura pahuwandu hwehuwandu uye hwekunaka fizikiki. Chimwe chezvikamu zvake zvakakosheswa zvebasa […]
Ndiani Akapinza Wheelchair Ramp
Posted on January 14, 2019 November 20, 2020 by csr 1687
Wiricheya ramp haina kugadzirwa nemunhu mumwe chete. Ichi chishandiso chekushandisa chakashanduka kuita zvazviri nhasi nekufamba kwenguva mushure memakore ehurema hwekuita. Migwagwa seVanhu Vanofamba Migwagwa yave iripo kubvira Girisi yekare. Yakadzokororwazve senzira yekufambisa vanhu muma1900 panguva yekugadzirwa kweNew York Grand […]